तपाईं कतै यस्ता प्रकारका आलु खाँदै त हुनुहुन्न ? ख्याल गर्नुस् – Makalukhabar.com
तपाईं कतै यस्ता प्रकारका आलु खाँदै त हुनुहुन्न ? ख्याल गर्नुस्
काठमाडौं, भदौ १२ । आलु भान्सामा अनिवार्य रुपमा पाइने परिकार हो । आलु, अन्य सागसव्जी, तरकारीमा मिसाएर मात्र नभइ तरकारी बनाएर उसीनेर तारेर आदी विभिन्न तरिकारले पकाउन सकिन्छ ।